12 Nhanho-Nhanho Nhanho Zvinyora Kunyora Yenyu Yokutanga paIndaneti - Chikamu I
Kudzoka mu1996, ndakatanga kugovera pamhepo zvidzidzo zvepamhepo kuburikidza nemakamuri ekukurukurirana kune vashoma vevadzidzi. Panguva iyoyo, pakanga pasina sarudzo dzakawanda dzepamhepo pamhepo ipapo uye izvo ini nevamwe tanga tichiita zvaive zvichitadzika. Nhasi, iwe unogona kuwana makosi pamapuratifomu akawanda, wozvitengesa pane yako wega webhusaiti, kana kuvapa kuburikidza nekuisa kwakadai saUdemy.
Chinhu chandiri kuda nezve në linjë online nhasi ndechekuti iwe une tani yezvisarudzo munzira yaunowana zvinhu zvacho kuvadzidzi vako. Chinhu chandinovenga pamusoro pemakosi epamhepo nhasi ndechekuti kune dzakawanda dzakasiyana mhando dzesarudzo zvekuti inogona kunyonganisa. Neraki, ndiri pano kuti materialeubatsire iwe kufamba nenzira dzako uye zvakare kuti informacionubatsire kumira kunze kweboka.
Chinyorwa ichi chiri muzvikamu zviviri. Chikamu chekutanga chechinyorwa chino chichaenda kuburikidza nezvose zvaunoda kuziva kuitira kuti kosi yako yekutanga isimuke, kubva pane zano kusvika pakusimudzira. Chikamu chechipiri chechinyorwa chino chinotsvagawo zvinotaurwa nevamwe vakagadzira makosi. Dzidza kubva pane zvavanokanganisa uye kubudirira.
1 Nhanho # 1: Sarudza Nyaya
1.2 # 2: Zviri nani pane dzimwe dzidzo paNyaya Iyoyo
1.3 # 3: Nyaya Unofarira Nezvekuda
1.4 # 4: Chinhu Chavanhu Vanofarira
2 Nhanho # 2: Platforma Sarudza
2.2 # 3: Kudzidzisa
2.3 # 5: Zvimwe Zvimwe
3 Nhanho # 3: Nyora Nzira Yako
4 Nhanho # 4: Shandisa kuverenga
5 Nhanho # 5: Wedzera Zvimwe
6 Nhanho # 6: Kursi i Tregut të Tregut
7 Nhanho # 7: Kutaurirana neVadzidzi
8 Nhanho # 8: Kuvana Misoro Mitsva kubva kumibvunzo
9 Nhanho # 9: Simba rekugara zvakare
10 Nhanho # 10: Dzimwe Nzira dzekuita mari Yenyu
11 Nhanho # 11: Kumbira Mhinduro
12 Nhanho # 12: Kumbira rubatsiro
13 Kurse Online në Ndikim
Nhanho # 1: Sarudza Nyaya
Nhanho yako yekutanga pakugadzira purogiramu iri paIndaneti informaciono kusarudza musoro kuti udzidzise. Izvi zvinotofanira kuva:
Kana iwe uchida kudzidzisa vamwe, iwe unoda kunzwisisa nheyo mukati nokunze. Fungidzira kana iwe wakamira pamberi pekamuri rakazara nevanhu uye vakanga vachikubvunza mibvunzo pamusoro pehurukuro iyi. Ungagona here kupindura nyore nyore mibvunzo iyo kana iwe unonzwa uchitadza kurasikirwa?
Zvakanaka kana kune vamwe vanhu vanonzwisisa nyaya yacho zvakanaka kana zvichida zviri nani kupfuura iwe. Chinokosha pane iyi ndechekuti iwe unonzwisisa zvakanaka.
# 2: Zviri nani pane dzimwe dzidzo paNyaya Iyoyo
Kana uchinge wava nehurukuro mupfungwa, tarisa kuti ndezvipi zvimwe zvidzidzo zvehurukuro imwechete zvatove zviripo. Ndezvipi zvese zvinoshandiswa nechokuita? Zvinouya nemavhidhiyo kana zvimwe zvigadzirwa këtu? Kunyatsodzidza dzimwe dzidzo kunze uko.
Iye zvino, edza kuwana makomba mune zvidzidzo. Pane nyaya dzisingatsananguri zvakakwana here kana kuti dzakaputirwa pamusoro? Ungadai uchiwedzera vhidhiyo inowedzera dzidzo këtu? Ndezvipi zvimwe zvaungaita?
Kana iwe usina chimwe chinhu chekuwedzera chekuwedzera, saka edza kufunga nezvenzira yakasarudzika yekurposedza iyo kosi. Semuenzaniso, unogona kurondedzera musoro nenyaya ye terevhizheni kana muvhi yakakurumbira. Takaita izvozvo pano kashoma nezvinyorwa zvakaita sekuti "Nzira yekumhanyisa Bhurogi rako Senge Imwe YeShark Kubva KuShark Tank" Member "Izvo Unogona Kudzidza kubva kuVampire Ditaret pamusoro pekuchengeta Vaverengi".
Nokurposedza musoro wenyaya nenzira yakasarudzika, unogona kubatsira vadzidzi kuti vanzwisise musoro wenyaya.
# 3: Nyaya Unofarira Nezvekuda
Kunyangwe zvakakosha kusarudza chinyorwa chinozivikanwa, usasarudze kudzidzisa kosi panzira yekuchinja dhiri kana iwe uchifunga kuti icho chinhu chakapusa kupfuura chero munhu angagona kuita uye haungambozoshandura rako wega. Unogona kuziva zvakawanda nezvenyaya iyi, asi kana usiri kuda nezvayo uye kudzidzisa vamwe nezvayo, kosi yacho ichadonha.
Wakatombogara mukirasi iwe paunogona kuudza purofesa anga asingadi kuvepo futi? Zvakanga zvisiri zvakanyanya kunakidzwa zvaive? Zvino, kërpudhat nezvevadzidzisi vawakave navo vaishuvira kugovana ruzivo rwavo newe. Kupfuura zvingangodaro, iwe wakawana yakawanda kubva mumakirasi iwayo.
# 4: Chinhu Chavanhu Vanofarira
Izvi zvinopera pasina kutaura kuti iwe unofanira kusarudza nyaya ine nhamba huru yevanhu vanofarira kudzidza zvakawanda. Kana ukasarudza nheyo yakasiyana zvikuru, unogona kunge wakaderedza niche yako yakawanda kuti ukweve vateereri. Semuenzaniso, unogona kupa kirasi yekubika pamusoro pekuti ungashandura sei eel muzvikwereti.
Iwe unogona kuve nechokwadi chekuti havasi vazhinji vanhu vanoda kudya eel uye kuti iwe unongodzivirira vateereri vako.
Kune rimwe divi, kana iwe ukapa kosi yekuti ungagadzira sei kipekee appetizer uye uine eel seimwe yavo asi uchipa mamwe matanho akasarudzika zvekare, ipapo unenge uchikwezva vateereri vakawandisa.
Iwe unogona kutsvakurudza nyaya kuburikidza neGoogle Keyword uye SEORush kuti uwane pfungwa yevanhu vanofarira zvikuru kudzidza zvakawanda pamusoro.
Nhanho # 2: Platforma Sarudza
Iko kune mahwendefa mazhinji akasiyana aunogona kushandisa. Iwe unogona kusarudza rimwe rine vateereri vakazvipira, rakadai seDademy kana kunyange kusarudza software yekuisa panzvimbo yako. Semuyenzaniso, Forbes anorondedzera kuti murairidzi weWademy wega wega wega anoshandisa madhora 7,000 $ për kurs, si rutivi rwakakura. Vamwe vangaita 60 dollarë më parë, ju lutemi bëni një vlerësim të mirë.
"Kazhinji evro vite mitezo yakakura kwazvo pane zvekugarisana nevamwe vanogona kukurudzira vateereri vavo kuti vatenge-vanogona kubudisa zviyero zvitanhatu gore negore kubva mumapoka избе," anonyora Dorie Clark, munyori we "Maitiro Okugadzira Mari Yokuita Nenzira Yenhare."
Moodle ndeye me softuer me burim të hapur dhe në qoftë se ju keni nevojë për panelin në internet, ju jeni duke kërkuar online. Inotendera iwe kuti ubvume vamwe vadzidzi, password simadza yakachengetedzwa mafolda, uye gadzira makosi, kuwedzera mavhidhiyo, uye uve nemakamuri ekukurukurirana ese munzvimbo imwe chete yakanaka. Ehe, iwe uchave wekuvimba neye Traffic iyo iwe yaunogona kuburitsa kune yako wega saiti kuti uwane vadzidzi, asi kana iwe uchinge uchinge uchinge uine hombe mail yekutumira, iyi sarudzo inogona kunge yakakunakira iwe.
# 3: Kudzidzisa
Kana iwe uchida kupa zvikoro zvarro se webinars izvo vashandisi vanogona kutora pazvinoda, WizIQ inosarudzo huru. Si për të parë ju nuk mund të përdorni më shumë informacion, të ndani informacionin ku nuk mund të përdorni kompjuterin tuaj, duke u mbështetur në njoftimet tuaja. WizIQ inopa misika yemuInternet iyo inogona kukubatsira kuwana vadzidzi kubva mumugwagwa wavo. Kunyange zviri nani, WizIQ inobatanidza neMoodle uye Blackboard Dzidza.
# 5: Zvimwe Zvimwe
Ehe, kune akawanda emakosi ekutonga enzvimbo. Vamwe vakasununguka, vamwe vanobhadharwa. Ju lutemi përdorni një softuer softuer, ju mund të përdorni një program të dobishëm për të gjetur informacione për përdorimin e kompjuterave tuaj dhe nëse ju jeni duke kërkuar për t’u përdorur në programin kompjuterik, ju mund të përdorni një program kompjuterik, pa pagesë. Imwe sarudzo ndeye yekare yakarposedzwa yepa chat online në internet chipinda iwe paunosangana nevadzidzi paInternet pane rimwe zuva uye nguva uye inopa yako kirasi. Vadzidzi vanobva vabvunza chero mibvunzo yavanenge vachiri kuda kupindurwa.
Nhanho # 3: Nyora Nzira Yako
Kana uchinge wasarudza chikuva, zvichava nyore kunyora yako kosi, nekuti iwe unoziva kuti ndeipi fomati iwe yaunoda kugadzira iyo kosi. Semuenzaniso, kana iwe uri kuronga kupa vhidhiyo kosi, ipapo iwe ucha unoda kunyora skripti yekutevera uye kudzidzira kurekodha zvidzidzo.
Zvimwe zvinhu zvekuisa mupfungwa kana iwe uchinyora kosi:
Munhu anotora kosi havaive zvaunoziva. Iye akatanga, paketa taka.
Ita glossary yemashoko uye tsanangura. Iva nechokwadi chekuti iwe unotsanangurwawo navo munguva yekutanga iwe uchitaura navo.
Gadzira zvinyorwa zviri nyore kumira uye kubata. Shandisa zvinyorwa, mabhoti, uye gutsa zvigaro kana zvichibvira.
Ita kuti mumwe munhu averenge basa rako kuti akubatsire kubata typos nekugadzirisa.
Tsvaga boka re beta kuti rione nzira yako uye ikuudze iwe kana uine mashumo eruzivo rwunoda kuzadzwa.
Kunyora iyo kosi, uye pamwe yekurirekodha, ndiyo imwe yenguva zhinji yekudya zvikamu zvekutengesa makosi online. Rangarira, zvisinei, kuti iwe uri kugadzira chimwe chinhu chaunogona kutengesa kakawanda pane imwe nguva mune ramangwana. Nekudaro, iwe uchinge uchiisa kune yakawanda kuedza iko izvozvi, iwe uchawana purofiti kubva kwairi kwenguva yakareba ichauya.
Nhanho # 4: Shandisa kuverenga
Parizvino, iwe unogona kunge une dzidzo yakanaka yakagadzirwa. Apa ndipo paunofanira kuisa basa rako kunze kwevhiki kana kupfuura. Ipapo, dzoka uye uchitarisa nemeso matsva uye ona kuti zvinhu zvose zvinowanikwa zviri nyore.
Verenga iyo yose yakadzika nepamusoro kana kuti uve nepurogiramu yekuverenga iverenge kwauri. Izvi zvichakubatsira iwe kunzwa chero nharo nemashoko uye kubata chero mazwi asina kunaka kana pazakontë typos.
Kunyange kana chirevo chako chiri chirongwa chemagiramu, zvakakosha kupedzisa chiito ichi. Nzira yako inogona kuverenga nenzira iyo inoita kuti zvive nyore kuti mudzidzi anzwisise zviri kuitika.
Nhanho # 5: Wedzera Zvimwe
Zvino, yave nguva yekuwedzera mune zvimwe zvekuwedzera. Rangarira kuti iwe unoda kuti kosi yako iratidzike pakati peboka revanhu. Kana iwe wakasarudza musoro urwo vanhu vanofarira kudzidza zvakawanda nezvazvo, ipapo panogona kunge paine dzimwe kosi zvekare pamusoro penyaya yako kunze uko. Chii chichaita chako kuve chakasarudzika? Nei vanhu vachizoda kusaina kosi yako pamusoro pevamwe?
Kungujzera të kërpudhave:
Hurukuro nedzimwe nyanzvi
Paneli i materialit bonus imwe nyaya
Rondedzero yeQ & Sezvo kubva kumakirasi akapfuura kana mashopu
Zvisungo kune mamwe mabhizimisi akadai semabhuku kana mawebsite ayo mushandi achawana achibatsira.
Ive nekuchengera kana uchibatanidza kune imwe nzvimbo kubva kune yako kosi, zvakadaro. Iwe haudi kuti mushandisi atange kuverenga imwe webhusaiti uye usazombodzoka kune yako. Iva anosarudza zvikuru uye ugovane chete izvo zvinogadzirisa zvechokwadi zvinyorwa zvako. Kana chiri chinhu iwe chaunogona kunyora iwe pachako nekupa kune vaverengi, zviri nani kuti uite izvo zviri iwe pachako uchengetedze trafiku iri munzira yako.
Nhanho # 6: Kursi i Tregut të Tregut
Iwe unogona kuvaka hwakanakisa nzira chero munhu akambogadzirwa, asi kana pasina mumwe anotora kosi hazvizokubatsira zvakanyanya. Kushambadzira yako online kosi kwakanyanya kukosha. Kune nzira dzakawanda dzekutengesa yako online kosi.
Gadzira webhusaiti yakatsaurirwa kutsanangura izvo kosi yako inopa vangangove vadzidzi.
Tumira zvinyorwa pane zvako Blog zvinoenderana nekosi yako, asi usape izvo zviri zvogëlo mukati mekosi kure.
Goverana zvemukati midhiya venhau uye ita hukama nevateereri vako.
Gadzira mazita emahofisi.
Iwe zvakare uchada kufunga kunze kwebhokisi.
Semuenzaniso, iwe unogona here kupa mushanyi kutumira pane iyo saiti isiri mumakwikwi neyako asi ine yakafanana inotaridzwa vateereri? Imwe pfungwa ndeyokupinda mumisangano kwaunogona kushamwaridzana nevanogona kuve mudzidzi.
Nhanho # 7: Kutaurirana neVadzidzi
Paunenge uchinge watengesa kosi kune vadzidzi vako vekutanga, iwe uchada kugovera zvakanakisa ruzivo rwavasati vamboona mune yepamhepo kosi. Izvi ndizvo zvinova kukurudzira kuti vaudze mhuri yavo neshamwari nezve mafambiro ako. Mukuwedzera, iwe uchave nenhapwa vateereri kana iwe ukanyora imwe imwe nzira mune ramangwana.
Gadzira autoresponders kuitira kuti miniti mudzidzi anyorese panguva yacho, anowana mamwe mashoko paanotanga uye kuti angapinda sei.
Gadzira zviyeuchidzo munzira kuti mudzidzi arege kukanganiswa uye akanganwa kuti apedze iyo kosi.
Kunze kwekunge iwe uine zviuru zvevadzidzi, izvo zvisingafungike kutanga, bata pasi pachako pachako uye ita chokwadi chekuti mudzidzi ari kunakidzwa nedzidzo. Iyo ipfungwa yakanaka kubata pasi mushure mekunge chikamu chekutanga chekosi chapedzwa, zvakare pakati pakati, uye pakupera kosi kukumbira kuongororwa.
Kurudzira vadzidzi kuti vanyorese kunyorera yako tsamba yekunyora kuitira kuti ugone kuramba uchibatana kunyange vapedza kudzidza. Izvi zvinogona zvakare kukupa iwe mukana wekutengesa-kuwedzera mune ramangwana kutengesa. Semuenzaniso, kana iwe ukapa kosi yekutanga bhizinesi idzva, iwe unogona kuwedzera yako kudzidzisa sewe yekuwedzera. Tichataura zvakawanda nezvekuwedzera mamwe masevhisi kumusoro kwemari yako pasi apa.
Nhanho # 8: Kuvana Misoro Mitsva kubva kumibvunzo
Iwe unogonawo kugadzira zvidzidzo zviduku zvinowedzera hurukuro yako yekutanga. Imwe yenzira dzakanakisisa dzekuwana nyaya idzi ndeyokuona mibvunzo yaunodzidza vadzidzi vako uye kupindura mibvunzo iyo nekudzika.
Semuenzaniso, kana nzira yako iri pamusoro pekugadzira imba uye vadzidzi vako vachiramba vachikumbira nezvenzira yakanakisisa yokupenda denga, unogona kuwedzera kuve yakasiyana-siyana yekutevera pakushonga kwekuisa.
Dzimwe nguva, mubvunzo unotungamira kune chimwe chinhu chakadzika-kwazvo kuti iwe unokwanisa kuwedzera kosi yakazara yeanoputika uye uve nekosi yechipiri kune vadzidzi vako. Kazhinji yenguva, zvakadaro, mibvunzo inotungamira kune pfupi pfupi-yekuwedzera kune kosi yako yekutanga. Aya mabhonasi emidziyo anogona kuchengeta mari ichiuya mairi iwe ungadai usina kuwana.
Nhanho # 9: Simba rekugara zvakare
Iwe wakambonzwa nezve nezvemari inosara kare. Izvi ndezvechokwadi kana iwe uchiita iyo kamwechete asi iwe uchiramba uchiwana mari nekusingaperi. Semuenzaniso, kana iwe ukanyora bhuku, unoisa pamusoro pekutengesa uye iwe unowana zviwanikwa zvebhuku pane iro bhuku kwenguva yakareba sezvaunopa kuti itengese.
Online kosi akafanana akafanana. Paunenge uchinge wagadzira iyo kosi, inoenderera kuunza mari nekufamba kwenguva.
Ramba uchitarira kuti kusara kwemari inoda kuti iwe urambe uchitengesa iwe webhusaiti yako uye zvigadzirwa. Zvimwe zvisingaiti, vatengi vanogona kuve nenguva yakaoma kukuwana iwe uye kutengesa kwako kuchapedza nguva.
Mari inosara yakakosha pasimba rebhizimusi rako. Iwe unogona chete kunyora makosi nekukurumidza zvakanyanya, asi nekuti kosi inozowana mari kunyangwe wapedza kunyora, unogona kuwedzera mari yako nekunyora kosi yechipiri apo yekutanga iri kupihwa, uyezve kosi yechitatu, uyezve kosi yechitatu, uyezve kosi yechitatu, uyezve kosi yechitatu, uyezve kosi yechitatu, uyezve kosi yechitatu, uyezve kosi yechatu.
Nokufamba kwemazuva, iwe unofanirwa kuvaka ruzivo rwekuwana mari asi usingaiti basa rakawedzerwa.
Nhanho # 10: Dzimwe Nzira dzekuita mari Yenyu
Iwe zvakare uchada kutarisa dzimwe nzira dzekuita mari nezvidzidzo zvako. Ini ndambotaura kuti unogona kupa zvekuwedzera uye kutsvaira makosi. Iwe zvakare unogona kuopa imwe-pane-imwe kudzidzisa. Izvi zvaizopa vadzidzi vega varairidzi zvikamu zvekuvabatsira kunyatsobata pfungwa.
Somuenzaniso, ndaiwanzopa zvinyorwa uye zvinyorwa zvechiChirungu zvevadzidzi vekudzidzira kumba. Ndakapa zvidzidzo zvose paIndaneti uye mu-munhu. Pakutanga, ndangodzidzisa zvidzidzo, asi ipapo ndakatanga kupa mamwe mawedzera ekuwedzera, semumwe we-on-one tutoring, anobatsira nekoroji kugovera zvinyorwa, uye kudzidzisa vadzidzi kuburikidza nekunywa.
Funga nezvekuti ungawedzera sei kukosha pane zvidzidzo zvako. Coaching ndicho chisarudzo chakanyatsojeka, asi kërpudhat kunze kwebhokisi uye ona chimwe chinhu chaungagona kuuya nacho.
Nhanho # 11: Kumbira Mhinduro
Kana iwe uchida kuti yako online nzira inyatso kupenya, iwe unofanirwa kukumbira mhinduro. Tumira vadzidzi vako kuongororwa kana vapedza kosi. Kana ukavabvumira kupedzisa kuongorora vasingazivikanwe, iwe unowana mhinduro yakatendeseka kazhinji yenguva zhinji.
Chaizvoizvo teerera kune zvichemo. Iwe unogona nyore kugadzirisa matambudziko mune yako kosi nekugadzirisa chero nyaya dzinounzwa nevadzidzi. Zvichida kune rakawandisa basa kunze kwekirasi, izvo zvidzidzo zvevhidhiyo hazvisi kurodha nekukurumidza, kana zvikamu zvekosi zviri kuvhiringidza. Chero dambudziko, mhinduro yako vadzidzi vako inobatsira.
Sezvineiwo, iwe unozonyora kosi yako asi wozoenderera mberi nekuinatsiridza iyo kusvikira iwe wazvinzwa kuti zvakakwana. Iyi ndiyo nzira yakanaka yekuona kuti zvemukati zvirinani kupfuura zveumwe munhu kunze uko.
Nhanho # 12: Kumbira rubatsiro
Kuwanza izwi pamusoro penyaya yako yepamhepo hazvizove nyore kana kuitika nekukurumidza. Ipfungwa yakanaka kukumbira rubatsiro. Izwi remuromo ndiyo imwe yemhando dzakanakisa uye dzakachipa dzekushambadzira.
Kumbira mhuri neshamwari kuti uudze vamwe nezvemafundo ako.
Nyora pamagariro evanhu uye bvunza veveri vako kuti vagoverane ruzivo pamusoro penyaya yako.
Vaka timu yemugwagwa kuti ikubatsire kusimudzira nzira yako. Vape kosi yemahara kana vachizozvitaura.
Kutengesana nevamwe vadzidzisi (kwete makwikwi) uye vataurire mapoka խուսափ pavanenge vachitaurirana.
Bvunza vapemhi pane vezvenhau kana vachizofunga kuedza nzira yako uye kukurudzira kana vachizvida (ita shuwa kuti unotanga hukama navo kutanga).
Iwe uchashamisika kuti vangani vanhu vangazoda kukubatsira kunze kana iwe uchingokumbira rumwe rubatsiro.
Kurse Online në Ndikim
Kunyora kosi yepamhepo hakusi kwakaoma, asi kunyora iyo online kosi iyo inobata vanhu zvinonetsa. Nekuteerera kune zvese izvo zvinoumba chikamu chakanakisa, iwe unogona kukudziridza mukurumbira semudzidzisi akanaka. Kwete chete vadzidzi vako vanongokuda, asi ivo vanokurumbidza iwe kune vamwe.
Sezvo mbiri yako painokudziridzwa, iwe unozotengesa dzakawanda uye dzakawanda dzidzo, uchigadzira iyo mari inosara yatakataura pamusoro apa. Muchikamu chechipiri chechinyorwa chino, tichatarisa mamwe matipi kubva kune vamwe vakagadzira makosi akabudirira epamhepo. Uchadzidza kubva kuzvikanganiso zvavo pamwe nekubudirira kwavo.
Kudzoka mu1996，ndakatanga kugovera pamhepo zvidzidzo zvepamhepo kuburikidza nemakamuri ekukurukurirana kune vashoma vevadzidzi。 Panguva iyoyo，pakanga
Kunyangwe iwe uri muridzi wechitoro التجارة الإلكترونية kana budging blogger ، chinhu chimwe chete
Kunyangwe iwe uri muridzi wechitoro eCommerce kana budding blogger, chinhu chimwe chete icho mawebhusaiti
Kunyangwe i uri muridzi wechitoro eCommerce kana lootustandev blogija, chinhu chimwe chete icho mawebhusaiti
Kunyangwe iwe uri muridzi wechitoro eCommerce kana budging blogger, chinhu chimwe chete icho mawebhusaiti